क्यान्सर Moles: लक्षण को विवरण र हटाउने को विशेषताहरु
लगभग हरेक मानव शरीर एक वा बढी Moles छ। नियम, तिनीहरूले बेचैनी कारण छैन, र स्वास्थ्य असर गर्दैन। छाला क्यान्सर - तर हालै, थप र थप, धेरै मानिसहरूले भोगेको रोग को harbingers हो कि क्यान्सर Moles देखा पर्न थाले। दुर्भाग्यवश, केही रोग को विकास गर्न जान्छ जो घातक तिल देखि सामान्य छुट्याउन सक्नुहुन्छ। लेख क्यान्सर Moles छन् जस्तो कसरी विस्तार वर्णन, आफ्नो विशेषताहरु र तिनीहरूलाई कसरी छुटकारा प्राप्त गर्न के हुन्।
घातक तिल के हो?
घातक तिल - melanoma भनिने क्यान्सर रोग। तिनीहरूले पराबैंगनी विकिरण प्रभावित छन् यो शरीर जुनसुकै ठाउँमा तर अक्सर खुला क्षेत्रमा देखेको हुन सक्छ।
Melanoma क्यान्सर को deadliest रुप हो। यो सबै पालन गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ , शरीर मा Moles तिनीहरूलाई विशेष गरी यदि धेरै। समय एक घातक तिल पहिचान गर्न भने, melanoma विकास रोक्न सक्छ।
छाला क्यान्सर को विकास रोक्न, यो एक क्यान्सर तिल कसरी पहिचान थाहा महत्त्वपूर्ण छ। तुलना लागि, सामान्य र क्यान्सर Moles को विशेषताहरु विचार गर्नुहोस्।
साधारण अहानिकारक Moles एक वर्दी रंग (खैरो वा कालो), स्पष्ट लाइन शरीर बाँकी तिनीहरूलाई अलग भनेर। लगभग6मिमी - Moles एक परिपत्र वा गोलो आकार, आफ्नो आकार छ।
मानव शरीरमा सामान्यतया 10 45 Moles देखि हुन सक्छ। नयाँ अप गर्न 40 वर्ष देखा पर्न सक्छन्, र केही, त्यसको विपरीत, उमेर संग गायब।
अब पनि घातक Moles कुरा गरौं। तिनीहरूले सामान्यतया धेरै छन्, र स्पष्ट उनि धेरै सामान्य रंग, आकार, आकृति फरक हो (यस मा थप - तल)। यो एक साधारण तिल घातक मा विकास गर्न सक्छन् भनेर हुन्छ। यो क्षण सम्झना र समय मा उपचार सुरु गर्न क्रममा, जांच गर्न हरेक महिना वा एक वर्ष आवश्यक छ।
लक्षण घातक Moles
घातक Moles (क्यान्सर कक्षहरू) विशिष्ट तिल तिनीहरूलाई छुट्याउन मदत केही स्पष्ट संकेत हो। रोग को प्रारम्भिक चरण - melanocytic dysplasia - अझै पनि उपचार योग्य छ। तसर्थ, समय पहिचान र क्यान्सर तिल हटाउन भने, तपाईं छाला क्यान्सर को विकास जोगिन सक्छौं।
1985 मा प्रत्येक जो प्रतिनिधित्व एक पत्र क्यान्सर Moles साइन इन, godu dermatologists संक्षिप्त ABCDE विकास गरे। समय, यो संक्षिप्त रूसी मा छाँटकाँट थियो, र त्यो ACORD (विषमता, किनाराको, रंग, आकार, गतिशीलता) जस्तै आवाज थाले। यी संकेत लागि हो र क्यान्सर outgrowth पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। हामीलाई प्रत्येक सुविधा विचार गरौं।
विषमता। माथि उल्लेख रूपमा, साधारण Moles symmetrical छन्। तपाईं slightest विषमता नोटिस भने, एक जरुरी आवश्यकता चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस् गर्न।
किनारा। क्यान्सर Moles, अनियमित अस्पष्ट र पनि दांतेदार किनारों छ।
रंग। पारंपरिक Moles, एउटै रंग को सामान्यतया (कालो वा खैरो)। शरीरमा क्यान्सर Moles रातो सहित विभिन्न रंग, को हुन सक्छ।
आकार। पारंपरिक तिल6मिमी मात्रा मा अधिक छैन। को तिल6भन्दा मिमी हो भने, यो संभावना घातक छ। साथै, क्यान्सर Moles तेजी आकार मा वृद्धि।
गतिशीलता। को तिल सौम्य छ भने, यो वर्ष आफ्नो रंग वा आकार परिवर्तन गर्दैन। तपाईं परिवर्तन देख्नु सुरु भने, तपाईं एक परीक्षा को लागि एक डाक्टर हेर्न आवश्यक छ।
तसर्थ, हामी विशेषताहरु र क्यान्सर तिल को लक्षण जांच। तपाईं कम से कम यी वस्तुहरूको एक नोटिस भने तुरुन्तै melanoma सम्भावित विकास रोक्न, डाक्टर गर्न चलाउनुहोस्।
एक व्यक्ति सबै मेरो जीवन Moles बस्न सक्छ, र तिनीहरूले उहाँलाई चिन्ता छैन। तर त्यहाँ मानक ट्यूमर घातक मा बढ्न सुरु कि जोखिम सधैं छ। एक क्यान्सर तिल मा रूपान्तरण लागि सबैभन्दा संभावना जोखिम कारक विचार गर्नुहोस्:
बलियो घामले डढाउने काम वा साधारण Moles मा घाम लामो अनावरण उपस्थिति।
गोरो छाला, हल्का कपाल र आँखा, र क्यान्सर Moles को शरीर मा गठन गर्न खतरा अरूलाई भन्दा बढी freckles मानिसहरूलाई।
साधारण Moles धेरै को शरीर, यसलाई ढिलो होस् वा पछि तिनीहरूले घातक मा विकास गर्न सुरु हुनेछ धेरै उच्च जोखिम छ भने।
Moles को मानक को ठूलो आकार। एक साधारण तिल नै ठूलो छ भने, विकास melanoma जोखिम धेरै पटक वृद्धि गरिएको छ।
वंशाणुगत कारक। परिवारका सदस्यहरूले छाला रोग को क्यान्सर छ भने, त्यसपछि तपाईं जोखिममा पनि छन्।
melanoma विकास रोक्न, यी सबै कारक विचार गर्न महत्त्वपूर्ण छ, र एक तिल क्यान्सर हुन्छ भन्ने slightest शङ्काको मा, डाक्टर जानुहोस्।
सर्वेक्षण कस्तो छ?
निदान गर्न "क्यान्सर Moles," यो पहिलो बाहिर dermoscopy लगे हुनुपर्छ। एक आवर्धक ग्लास प्रयोग र dermatoscope को गठन-अप को सतह मा देख्न सक्नुहुन्छ melanoma को संकेत। यो अध्ययन र द्वारा छाला रंग र रगत नमूना संकलन जहाजहरु आकलन को तिल वृद्धि।
पुष्टि निदान को बायोप्सी (हिस्टोलजी) पछि। को तिल को एक भाग हटाउने ध्यान प्रयोगशाला यसको संरचना अध्ययन गर्न, स्थानीय एनेस्थेसिया प्रयोग गरेर। यो विधि सबैभन्दा सही एक छ।
एक प्रारम्भिक चरण मा क्यान्सर निदान, तपाईं mikrodermoskopii कम्प्युटर प्रणाली प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो विधि अहिलेसम्म धेरै व्यापक छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, तपाईंले आफ्नो Moles को उपस्थिति वा आकार मा slightest परिवर्तन देख्यो भने - तपाईं एक डाक्टर हेर्न आवश्यक छ। डाक्टर निदान को इच्छित विधि चयन हुनेछ, र छाला क्यान्सर को जोखिम को समसामयिक परीक्षा कम छ।
केही तथ्य तपाईं क्यान्सर Moles बारेमा जान्नु आवश्यक छ
एक व्यक्ति को शरीर 50 भन्दा बढी Moles छन् भने, त्यसपछि यसलाई हुनुपर्छ धेरै ध्यान दिएर आफ्नो अवस्था अनुगमन र डाक्टर-ऑन्कोलॉजिस्ट ठेगाना को slightest परिवर्तन मा।
यी सुविधाहरू साथै, तपाईंले ध्यान गर्नुपर्छ भनेर धेरै कारक छन्:
Darkening। सामान्य तिल कालो हुन सक्छ। तर यो मूलतः खैरो अचानक अँध्यारो भयो भने, यो चासो लागि कारण छ। धेरै मानिसहरू कालो आदर्श छ, किनभने Moles को darkening ध्यान छैन।
सुनिंनु। सबै भन्दा साधारण वरिपरि छाला भने birthmarks inflamed वा राता गठन, तपाईं तुरुन्त परीक्षा लागि डाक्टर जाने गर्नुपर्छ। र कुनै पनि मामला मा रक्सी संग छाला को inflamed क्षेत्रमा ह्यान्डल गर्न असम्भव छ, यो केवल अवस्था exacerbate गर्न सक्नुहुन्छ।
सतह। को तिल को सीमाहरु भने गरिएको छ। तर हामी पनि सतह ध्यान गर्नुपर्छ। माथि देखि यो कुनै स्पष्ट अनियमितताहरु संग, चिल्लो हुनुपर्छ। कुनै पनि भने, यो melanoma एक चिन्ह हो।
वरिपरि सामान्य Moles छाला को darkened क्षेत्रमा देखा तपाईं हुनुहुन्छ भने, यो चासो लागि ठूलो कारण छ। को ऑन्कोलॉजिस्ट संग जाँच गर्न जरुरी आवश्यकता।
तपाईं melanoma विकास संकेत धेरै देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा। यो ती सबै सम्झना गर्न धेरै गाह्रो छ। मनमा राख्न मानक Moles कुनै पनि परिवर्तन यो एक घातक परिवर्तन छ भनेर संकेत गर्छ सक्छ।
मिति लागि मात्र सम्भव एक melanoma को उपचार क्यान्सर Moles हटाउन छ। सञ्चालन को जटिलता स्थिति र बेवास्ता गठन आकार मा निर्भर गर्दछ। सानो growths पर्याप्त आधा घण्टा।
जब तपाईं एक क्यान्सर तिल सर्जन एउटै ठाउँमा नयाँ को उद्भव रोक्न छाला (1 सेमी) को तिल वरिपरि एउटा सानो क्षेत्र कटौती हटाउन। यो ठूलो हदसम्म र घातक तिल को आकार, महान् हटाउन आवश्यकता वरिपरि छाला।
काटन पछि उनको जन्म चिनो नमूना प्रयोगशाला पठाइयो। त्यहाँ यस्तो नयाँ growths शरीर देखिने एक संभावना छ, यसको प्रसार अध्ययन हो।
के पूर्वानुमान डाक्टर दिन हो?
ट्यूमर को मोटाइ - यो जो क्यान्सर चिकित्सा विज्ञानियों भविष्यवाणी बनाउन मुख्य मापदण्ड हो। को तिल सानो थियो भने, melanoma मुक्त बाँच्न मौका यो सानो छ पुन शिक्षा, र जोखिम बढ्दै छ।
छोटो गठन-अप हटाउन पछि पुनर्वास अवधि। यस हटाइएको तिल को स्थान मा एकदम चाँडै निको पार्नुहुन्छ कि खत गठन। खत आकार हटाउने को विधि मा निर्भर गर्दछ।
हटाउने लेजर द्वारा - सबैभन्दा सुरक्षित बाटो, लगभग छ निशान र scars छोड्न छैन। तर यो विधि गंभीर अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिँदैन।
यो अपरेसन समसामयिक तरिका गरियो भने, भविष्यमा melanoma जोखिम धेरै सानो छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ। भविष्यमा, तपाईं बस नियमित कमजोरीको वशमा पऱ्यौं बच्न ऑन्कोलॉजिस्ट मा उत्पन्न गर्न आवश्यक छ।
यस लेखमा हामी मदत कि क्यान्सर Moles, के तिनीहरूलाई व्यवहार गर्न तरिकाहरू छन्, साथै संकेत विकास एक प्रारम्भिक चरण तिनीहरूलाई पहिचान के, विस्तार देख्यो। आफ्नो शरीर को ट्रयाक राख्न र स्वस्थ रहन!
किन बढी र थप पेट को क्यान्सर जवान मान्छे मा निदान?
कारण र प्रोस्टेट क्यान्सर को लक्षण। उपचार प्रोस्टेट क्यान्सर को विधिहरू
इस्राएलका ग्रीवा क्यान्सर को उपचार: कसरी रोग हटाउन
थाइरोइड क्यान्सर को मुख्य लक्षण
को मृगौला को ट्यूमर: लक्षण र उपचार। कति को निदान बस्न र यसलाई के निर्भर गर्छ?
को कमेडी "मामूली," को वचनहरू मानिसहरूलाई गइसकेको
ब्राजिलमा नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्या: परम्परा को उत्सव
"पेबल्स र Galyshev": सन्तुष्ट महिला को समीक्षा
काठ लागि चिस्यान मीटर: सबै भन्दा राम्रो मोडेल को एक समीक्षा। आफ्नो हातले काठ लागि चिस्यान मीटर कसरी बनाउने?
फूल उद्यान बनाउने - सिर्जना र पराउँछु
कति ग्राम पिठो एक चमचा, र कसरी बाहिर वजन बिना पीठो मापन गर्न?
दायाँ महिलाहरु को लागि आकार वस्त्र कसरी निर्धारण गर्ने?
म कार्यालय सजाउनु गर्नुपर्छ?